25 sq km ny alan'i ala sy ny biby dia miandry anao ao amin'ny tanànan'ny tanàna lehibe indrindra any Vienna. Mandeha manodidina, miaraka mihazakaza, na manana sary an-tsaina ao amin'ity oasis maitso ity, dia hanao ny Viennese fialantsasatra tanteraka.
Feno tsy ampoizina ny momba an'i Eropa. Na firy na firy ny nitsidihananao an'i Eropa, misy foana ny fitsangatsanganana vaovao. Our 7 tanàna tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelany any Eropa dia tsara ho an'ireo mpitsangatsangana sy mpandeha mampientanentana. Ankoatry ny, ho anao izay te hijery tsotra izao ny eny ivelany sy ny tontolon'ny tsara tarehy.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “Tanàna 7 tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelany any Eropa” amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/cities-outdoor-activities-europe/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
fiaraha-mientana frenchriviera outdoor OutdoorActivities Tranride Train Travel traintravelgermany travelitaly travelswitzerland TravelVienna